Adobe Portfolio: Manangana sy mampiantrano ny portfolio-tserasera | Martech Zone
Adobe Portfolio: Manamboara sy mampiantrano ny portfolio-nao amin'ny Internet
Alahady 24 aprily 2016 Alahady 24 aprily 2016 Douglas Karr
Tena mandaka ny lalao an-tserasera i Adobe. Nampiasa Creative Cloud izahay nandritra ny roa taona izao ary mahita fa mihamaro hatrany ny teknolojia Adobe ampiasainay. Ankehitriny Adobe dia nandefa ny azy manokana portfolio- tranokala, vahaolana tonga lafatra ho an'ny mpihaino kendrena ny mpamorona sy ny masoivoho. Ankoatry ny fampiasanao ny anaranao manokana dia manolotra ireto fiasa manaraka ireto ny editor an'ny Portfolio an'i Adobe:
Ho fanampin'ny fampiasana ny anaranao manokana, Adobe portfolio manolotra ireto manaraka ireto:
Access Typekit ny fitahirizam-bokin'ny endritsoratra.
Ny fanitsiana mivantana dia ahafahanao mahita ireo fanovana nataonao.
Fandraisana mivantana: Izay rehetra hitanao dia azonao atao ny manova.
Topazo maso mialoha ny valiny amin'ny tranokala, takelaka sy finday.
Mamorona tetikasa amin'ny Portfolio na Behance ary ampifanaraho eo amin'ny roa.
Safidy hampiatoana ny tsindrio havanana hiarovana ny sarinao.
Safidy ahafahana maneho ny boaty jiro amin'ny sarinao.
Ny sehatra dia efa manana lohahevitra tsara tarehy, vonona amin'ny finday ary mamaly:
Tags: Adobeadobe portfolioFITONDRANTENAportfolio amin'ny Internetportfolio-tranokala portfoliotypekit
Antontan'isa momba ny fitomboan'ny haino aman-jery sosialy tamin'ny taona 2015